Windows နဲ့ Microsoft Office တွေကို Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက် Download လုပ်နည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home How to Download Other Downloader PC Software Tutorial Tutorial Videos Windows Software Windows နဲ့ Microsoft Office တွေကို Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက် Download လုပ်နည်း
Windows နဲ့ Microsoft Office တွေကို Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက် Download လုပ်နည်း
Maung Pauk at 12:26:00 AM How to Download, Other Downloader, PC Software, Tutorial, Tutorial Videos, Windows Software,
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Office 2013, Office 2016, Office 2019 တွေရဲ့ ISO ဖိုင်ကို Microsoft ရဲ့ Official Link ကနေ တိုက်ရိုက် Download လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပါ..
အောက်ဆုံးမှာ ပေးထားတဲ့ Link ကနေ Windows ISO Downloader ကို Download လုပ်ပြီး Run လိုက်ပါ.. ကြော်ငြာ တက်လာရင် Minimize လုပ်ထားပါ..
ညာဘက်ခြမ်းမှာ Windows7(August 2018) ကိုရွေးပါ.. ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကိုယ် Download လုပ်ချင်တဲ့ Windows7Edition ကိုရွေးပြီး အဲဒီအောက်နားမှာ Language ကိုရွေးပါ..
(Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Office 2013, Office 2016, Office 2019 တှရေဲ့ ISO ဖိုငျကို Microsoft ရဲ့ Official Link ကနေ တိုကျရိုကျ Download လုပျတဲ့နညျးလမျးပါ..
အောကျဆုံးမှာ ပေးထားတဲ့ Link ကနေ Windows ISO Downloader ကို Download လုပျပွီး Run လိုကျပါ.. ကွျောငွာ တကျလာရငျ Minimize လုပျထားပါ..
ညာဘကျခွမျးမှာ Windows7(August 2018) ကိုရှေးပါ.. ဘယျဘကျခွမျးမှာ ကိုယျ Download လုပျခငျြတဲ့ Windows7Edition ကိုရှေးပွီး အဲဒီအောကျနားမှာ Language ကိုရှေးပါ.. )
ပြီးရင် Download ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်ပါ..
(ပွီးရငျ Download ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပျပါ..)
IDM က တိုက်ရိုက် Download မလုပ်နိုင်ရင် Default Browser မှာ Download Link ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
(IDM က တိုကျရိုကျ Download မလုပျနိုငျရငျ Default Browser မှာ Download Link ပျေါလာပါလိမျ့မယျ.. )
အဲဒီ Link ကို Copy ယူပြီး IDM မှာ Add Link ကိုနှိပ်ပြီး Link ကို ကူးထည့်ပါ.. ပြီးရင် IDM နဲ့ Download လုပ်နိုင်ပါပြီ...
(အဲဒီ Link ကို Copy ယူပွီး IDM မှာ Add Link ကိုနှိပျပွီး Link ကို ကူးထညျ့ပါ.. ပွီးရငျ IDM နဲ့ Download လုပျနိုငျပါပွီ...)
အဲလိုပဲ Windows 10 ကိုရွေးပြီး ဘယ်ဘက်မှာ Edition ကိုရွေးပါ. Confirm ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် Language က English ကိုရွေးပါ.. Confirm ကိုနှိပ်ပါ.. 64-bit သို့မဟုတ် 32-bit ထဲက ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုရွေးပြီး Download လုပ်နိုင်ပါပြီ...
(အဲလိုပဲ Windows 10 ကိုရှေးပွီး ဘယျဘကျမှာ Edition ကိုရှေးပါ. Confirm ကိုနှိပျပါ.. ပွီးရငျ Language က English ကိုရှေးပါ.. Confirm ကိုနှိပျပါ.. 64-bit သို့မဟုတျ 32-bit ထဲက ကိုယျကွိုကျရာကိုရှေးပွီး Download လုပျနိုငျပါပွီ...)
Office မှာလည်း အတူတူပါပဲ.. ဒါပေမယ့် Office 2010 ကိုတော့ Download လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. Office 2013 မှာ Language ကို English ကိုရွေးနိုင်ပြီး 2016 နဲ့ 2019 မှာတော့ English Version ကိုမရနိုင်ပါဘူး.. Japanese Version ကိုသာ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
(Office မှာလညျး အတူတူပါပဲ.. ဒါပမေယျ့ Office 2010 ကိုတော့ Download လုပျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး.. Office 2013 မှာ Language ကို English ကိုရှေးနိုငျပွီး 2016 နဲ့ 2019 မှာတော့ English Version ကိုမရနိုငျပါဘူး.. Japanese Version ကိုသာ ရနိုငျမှာဖွဈပါတယျ...)
Download Windows ISO Downloader 8.21.0.128.exe: 6.64 MB
How to Download, Other Downloader, PC Software, Tutorial, Tutorial Videos, Windows Software
How to Download Other Downloader PC Software Tutorial Tutorial Videos Windows Software
Windows နဲ့ Microsoft Office တွေကို Microsoft ကနေ ...